युवा व्यवसायी खनालद्वारा गैडेआहलमा १५ परिवारलाई १ महिना पुग्ने खाघान्न वितरण - Chitwan Online Khabar
Breaking News: आज साउन २० गते बुधवार, हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल / भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज /
युवा व्यवसायी खनालद्वारा गैडेआहलमा १५ परिवारलाई १ महिना पुग्ने खाघान्न वितरण
२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १२:०१
चितवन । युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी पुरू खनालले सामाजिक कार्यलाई तीव्र पारेका छन् । पोल्टी व्यवसायमा अब्बल रहेका खनालले आज फेरि पुर्वी चितवनको खैरहनी ४ स्थित गैडेआहलका विपन्न १५ घर परिवारलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ । व्यवसायसगै सामाजिक अभियान्ताका रूपमा समेत आफुलाई अग्रसर बनाईरहनुभएका खनाल यहाँका विपन्नलाई १ महिनाका लागि पुग्ने गरि चामल,दाल, नुन र तेलसहित प्याकेज राहत वितरण गरेको हुन् ।
हामी व्यवसायी हौं, व्यवसाय मात्र होईन् सामाजिक कार्य र हाम्रो उत्तरदायित्व प्रती म सजक छु उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनले सबै मारमा पर्नुभएको छ, हामी सक्ने नसक्नेलाई सहयोग गर्ने हो । छ र त दिनसकेको हुं । उघोग वाणिज्य संघ रत्ननगरका उघोग तर्फका उपाध्यक्ष समेत रहेका खनाल नेपाल ह्ययाचरी उघोग संघका सहसचिव समेत रहेका छन् ।
विगतमा समेत पुरू खनालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न दिन दुःखी र गरिबलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यो राहत वितरण अभियानसगै खनाल लकडाउन र कोरोना भईरसका कारण समस्यामा परेका अन्यलाई समेत सहयोग गर्ने उद्वघोष गरेका छन् । उहाँले आज यो सहयोग खैरहनी हेल्प डेक्स मार्फत विपन्न समुदायको घरमा नै पुगेर सहयोग गरेका छन् । कार्यक्रम खैरहनी हेल्प डेक्सका अभियान्ता एवंम् गेट एफएमका अध्यक्ष रामेश्वर रिजाल, पत्रकार महासंघ चितवनका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, अभियान्ता सानू केसी, पुर्ण बोहरा, शान्तामाणि नहरकी, रामजि कुवंर लगायतको सहभागीता थियो । यसअघि मात्र खनालले चितवनका पत्रकारलाई प्रेस संगठन नेपाल चितवन शाखा मार्फत ५ हजार थान माक्स र १ सय थान सेनिटाईजर सहयोग गरेका थिए ।
राजदूतमार्फत् भारतलाई दियो लिपुलेकबारे ’कूटनीतिक नोट’
भारतमा बढ्दै ‘कोभिड १९’ का सङ्क्रमित
सात स्थानीय तह युवा मैत्री
रोटरी क्लवद्धारा विद्यार्थीहरुलाई स्कुल ब्याग हस्तान्तरण
विधुत प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याउने तयारी
आज साउन १९ गते मंगलवार, हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल
आज साउन १६ गते शनिबार , हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल
रत्ननगरमा शिक्षकहरुको रिले अनसन सुरु
आज साउन २० गते बुधवार, हेर्नेुहोस् आजको दिन । तपाईको कस्तो छ त ! आजको राशिफल